အိမ်သုံး မီတာခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ တွက်လို့ ရတဲ့နည်း – WunYan
အိမ်သုံး မီတာခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ တွက်လို့ ရတဲ့နည်း
အိမ်သုံးမီတာခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ တွက်လို့ ရပြီ
မီးပူ – ၁၂၀၀ ဝပ် – ၅.၂ အမ်ပီယာ
မီးဖို – ၁၆၀၀ ဝပ် – ၇ အမ်ပီယာ
တီဗွီ+စလောင်းစက် – ၄၀၀ ဝပ် – ၁.၈ အမ်ပီယာ
အဝတ်လျှော်စက် – ၂၀၀ ဝပ် ၀.၉ အမ်ပီယာ
ရေမော်တာ – ၁၂၀၀ ဝပ် – ၅.၂ အမ်ပီယာ
အဲကွန်း – ၁၂၀၀ ဝပ် – ၅.၂ အမ်ပီယာ
မီးသီး+မီးချောင်း – ၁၅၀ ဝပ် – ၀.၇ အမ်ပီယာ
အခြားအသုံးအဆောင်များ – ၅ အမ်ပီယာ – ၃၁ အမ်ပီယာ
အိမ်သုံးမီတာ တစ်လုံး၏ ခံနိင်ရည် ဝန်အားသည် (5/30) Amp. (10/30) Amp. အများဆုံး ၃၀ အမ်ပီယာထိ အသုံးခံနိင်ရည်ရှိပြီး အထက်ပါ ပစ္စည်းများအား တစ်ပြိုင်နက် သုံးစွဲနေပါက ( တစ်နာရီလျှင်)
မီတာယူနစ်တက်နှူန်း kilo watt per hour (Kw/hr)
VI = W သည် 230v x 30A = 6900 Watt=7Kw
=7Unit. ဖြစ်နေ၍ တစ်ရက်လုံး ပစ္စည်းပြုံသုံးချိန်
တစ်နာရီဆိုက တစ်ရက်လျှင် ၇ ယူနစ်ဖြင့် တစ်လစာ ယူနစ် ၂၂၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်မည်။
အထက်ပါ ပစ္စည်းများ ခွဲခြား အသုံးပြုချိန်အတွက် တစ်ရက် ၁၀ ယူနစ်ဖြစ်က တစ်လ ယူနစ် ၃၃၀ ထပ်ပေါင်းက (၂၂၀+၃၃၀)=၅၅၀ ယူနစ် ဝန်းကျင် မီတာ တက်ပါမည်။
သာမန် မိသားစု တစ်လသုံး မီတာခ= ၅၅၀ ယူနစ်
အလွှာမခွဲ တစ်ယူနစ် ၃၅ ကျပ်ဖြင့် တစ်လ နှစ်သောင်းခန့် ကျပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးလင်းရေး နယ်ပယ် တစ်ယူနစ် ၃၅၀ ကျပ်ဖြင့်သုံးက တစ်လ ကျပ်နှစ်သိန်းခန့် ကျမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ အိမ်သုံးမီတာအား မည်သည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သုံးနိင်ပြီး ဝန်အား ခံနိင်ရည် အမ်ပီယာ (သို ဝပ်အား အခြေအနေ မည်မျှထိ ရှိနိင်လဲဟု သိချင်သူများအား ရည်ရွယ် ရေးသားပါသည်။ ယခင်က တပ်ထားသော Analog နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီတာ တံဆိပ်ဟောင်းများတွင် တောက်လျှောက်သုံး အမ်ပီယာ ၃၀ ထက် ကျော်သုံးလည်း ဝန်ပိုဒဏ်ကြေး ရိုက်ခံရမူ မရှိပါ၊ အခန့် မသင့်က မီတာလောင်မူများသာ ဖြစ်တတ်သည်။
ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင် အသစ်ထုတ်ပေးသော ဒစ်ဂျစ်တယ် မီတာ အသစ်သည် သတ်မှတ်ဝန်အား ၃၀ အမ်ပီယာ ကို တောက်လျှောက် တစ်နာရီထက် အချိန်ပိုမို သုံးပါက ယင်းမီတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသော ရုံးထိုင် ဆာဗာကွန်ပျူတာတွင် Overload Error ပြပြီး သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ရိုက်ခံရမည် ဖြစ်​သည်​။
မိမိအိမ် လစဉ် ယူနစ်တွက်ချက်တတ်ပြီး မီတာခ အနည်းအများ ချိန်ဆနိင်ကြပါစေသော်။
Credit : STG
အိမျသုံး မီတာခ ဘယျလောကျကမြလဲ တှကျလို့ ရတဲ့နညျး
အိမျသုံးမီတာခ ဘယျလောကျကမြလဲ တှကျလို့ ရပွီ
မီးပူ – ၁၂၀၀ ဝပျ – ၅.၂ အမျပီယာ
မီးဖို – ၁၆၀၀ ဝပျ – ၇ အမျပီယာ
တီဗှီ+စလောငျးစကျ – ၄၀၀ ဝပျ – ၁.၈ အမျပီယာ
အဝတျလြှျောစကျ – ၂၀၀ ဝပျ ဝ.၉ အမျပီယာ
ရမေျောတာ – ၁၂၀၀ ဝပျ – ၅.၂ အမျပီယာ
အဲကှနျး – ၁၂၀၀ ဝပျ – ၅.၂ အမျပီယာ
မီးသီး+မီးခြောငျး – ၁၅၀ ဝပျ – ဝ.၇ အမျပီယာ
အခွားအသုံးအဆောငျမြား – ၅ အမျပီယာ – ၃၁ အမျပီယာ
အိမျသုံးမီတာ တဈလုံး၏ ခံနိငျရညျ ဝနျအားသညျ (5/30) Amp. (10/30) Amp. အမြားဆုံး ၃၀ အမျပီယာထိ အသုံးခံနိငျရညျရှိပွီး အထကျပါ ပစ်စညျးမြားအား တဈပွိုငျနကျ သုံးစှဲနပေါက ( တဈနာရီလြှငျ)
မီတာယူနဈတကျနှူနျး kilo watt per hour (Kw/hr)
VI = W သညျ 230v x 30A = 6900 Watt=7Kw
=7Unit. ဖွဈနေ၍ တဈရကျလုံး ပစ်စညျးပွုံသုံးခြိနျ
တဈနာရီဆိုက တဈရကျလြှငျ ၇ ယူနဈဖွငျ့ တဈလစာ ယူနဈ ၂၂၀ ဝနျးကငျြဖွဈမညျ။
အထကျပါ ပစ်စညျးမြား ခှဲခွား အသုံးပွုခြိနျအတှကျ တဈရကျ ၁၀ ယူနဈဖွဈက တဈလ ယူနဈ ၃၃၀ ထပျပေါငျးက (၂၂၀+၃၃၀)=၅၅၀ ယူနဈ ဝနျးကငျြ မီတာ တကျပါမညျ။
သာမနျ မိသားစု တဈလသုံး မီတာခ= ၅၅၀ ယူနဈ
အလှာမခှဲ တဈယူနဈ ၃၅ ကပျြဖွငျ့ တဈလ နှဈသောငျးခနျ့ကပြွီး ကိုယျထူကိုယျထ မီးလငျးရေး နယျပယျ တဈယူနဈ ၃၅၀ ကပျြဖွငျ့သုံးက တဈလ ကပျြနှဈသိနျးခနျ့ကမြညျဖွဈသညျ။
လကျရှိ အိမျသုံးမီတာအား မညျသညျ့ လြှပျစဈပစ်စညျးမြား သုံးနိငျပွီး ဝနျအား ခံနိငျရညျ အမျပီယာ (သို ဝပျအား အခွအေနေ မညျမြှထိ ရှိနိငျလဲဟု သိခငျြသူမြားအား ရညျရှယျ ရေးသားပါသညျ။ ယခငျက တပျထားသော Analog နဲ့ဒဈဂဈြတယျ မီတာ တံဆိပျဟောငျးမြားတှငျ တောကျလြှောကျသုံး အမျပီယာ ၃၀ ထကျ ကြျောသုံးလညျး ဝနျပိုဒဏျကွေး ရိုကျခံရမူ မရှိပါ၊ အခနျ့မသငျ့က မီတာလောငျမူမြားသာ ဖွဈတတျသညျ။
ယခု ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဧပွီလမှ စတငျ အသဈထုတျပေးသော ဒဈဂဈြတယျ မီတာ အသဈသညျ သတျမှတျဝနျအား ၃၀ အမျပီယာ ကို တောကျလြှောကျ တဈနာရီထကျ အခြိနျပိုမို သုံးပါက ယငျးမီတာနဲ့ ခြိတျဆကျထားသော ရုံးထိုငျ ဆာဗာကှနျပြူတာတှငျ Overload Error ပွပွီး သတျမှတျဒဏျကွေး ရိုကျခံရမညျ ဖွဈသညျ။
မိမိအိမျ လစဉျ ယူနဈတှကျခကျြတတျပွီး မီတာခ အနညျးအမြား ခြိနျဆနိငျကွပါစသေျော။